Kuthetha ukuthini ukuphupha unenkqayi? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Abantu abaninzi bacinga ukuba ukuphupha ngenkqayi luphawu olubi, kodwa enyanisweni akusebenzi njalo. Nangona kungavakali kulungile, cinga ngomntu okonzakalisa umlenze wakhe kwaye ufumanise ukuba kutheni.
Unokuqonda ukuba amanye amayeza aya kwenziwa ukoyisa kwaye le nto ihlala inomdla kakhulu. Ke ngoko, kubalulekile ukuqonda ukuba iphupha liyafana kwaye luphawu oluqinileyo lokuba kukho iingxaki.
Ukuvumela lonke ulwazi, kubalulekile ukuba unike ingqalelo kwizinto ezininzi kwaye uqonde ngakumbi malunga nemeko leyo. Isicatshulwa siza kukubonisa yonke into kwaye sikwazise ngokuchanekileyo into ekufuneka yenziwe ukuze kwenziwe umsebenzi omninzi.
1 Iphupha malunga nenkqayi
2 Iphupha malunga nenkqayi yakho
3 Iphupha lamadoda anempandla
4 Iphupha malunga neNgcaciso yeNcwadi yeNqaku
5 Iphupha malunga neNkqantosi yabasetyhini
6 Ukuphupha indoda endala inenkqayi
7 Ngaba iphupha liqinisekile okanye alilunganga?
Iphupha malunga nenkqayi
Kwindawo yokuqala, ukuphupha unempandla kubonisa iingxaki kwaye indlela yokusombulula ayikhange ibe ntle. Ke ngoko, kuyafuneka ukufumana ezinye iindlela ezahlukileyo ezivumela ukusonjululwa kwezi ngxaki.
Kubalulekile ukuba ube nokuqonda kwezi meko kwaye uqonde ukuba yonke into ebomini iyakuhlala ikhona indlela. Ngale ndlela, kuyafuneka ukuba ube nokuqonda okunje kwaye utyekelo lwendalo luya kuba lunokusebenza ngakumbi.
Ngokuqinisekileyo, ukwazi izinto ezininzi lelona nqaku liqinisekileyo kwaye kubalulekile ukuba wazi ezona meko zixhaphakileyo. Ujongene nale meko, masibone apha ngezantsi ukuba ungalufumana njani olona lwazi luphambili.
Iphupha malunga nenkqayi yakho
Eyona nto kugxilwe kuyo kunye nesona sizathu seengxaki sikumntu: kuye hayi kwabanye.
Ingcebiso kukujonga ezinye iindlela ezahlukileyo kwaye eyona iphambili kukwazi ukuhoya zonke izinto ezinexabiso elikhulu. Cinga ngemvelaphi yeengxaki kwaye uqonde into esisiseko, kukuqonda okulula kakhulu oko. Ukuba ingxaki ayisombululeki, isonjululwa ngokuzenzekelayo kwaye kufuneka siqhubeke nokudlulela phambili. Lixesha lokuba ungaqhubeki uhlehlisa kwaye ungacingi ukuba isisombululo sale ngxaki siza kuvela kwinto yangaphandle.
Iingxaki kufuneka zisonjululwe "ngaphakathi ngaphakathi", Oko kukuthi, ukuphucula ubudlelwane bakho kunye el mundo.
Iphupha lamadoda anempandla
Indlela esijongana ngayo nenyani isenokungabi yeyona iphambili, kodwa izikhombisi kuya kufuneka zitshintshwe kungekudala. Ukwenza ngale ndlela kunokuba yingozi kwaye akuncedi nganto, kuba kuhlala kugcina ubunzima bakho.
Into ephambili kukuba uqonde ukuba isisombululo asixhomekekanga kwabanye. Ukuphupha ubudoda endodeni luphawu olucacileyo lokuba onke la manqaku ayinyani. Khumbula ukuqaphela enye imeko ekhethekileyo: ubunzima bakho kunye nokusombulula iingxaki. Ukuba ngaphezulu kwengxaki kubhetele kwaye kuyakwenza yonke into isebenze ngcono kwaye ibengcono.
Iphupha malunga neNgcaciso yeNcwadi yeNqaku
Kwiincwadi zamaphupha iintsingiselo zeli phupha zihlala zinxulunyaniswa nenani elikhulu leenkxalabo ezikhoyo. Ke ngoko, ingcebiso ihlala icamngca kwaye iqonde ukuba iingxaki ezikhoyo zifuna ukusonjululwa.
Hlala uzilungiselele ukoyisa okanye hayi, kuba kuxhomekeke kwimeko abanokunyuka kuphela kwaye bangasonjululwa. Cinga ngayo, cinga ngayo kwaye uya kubona ukuba olona khetho lufanelekileyo luya kuza kuwe.
Iphupha malunga neNkqantosi yabasetyhini
Ixesha lifikile lokutshintsha indlela ojamelana ngayo nenyani, kuba ayisasebenzi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqonda ukuba yonke into inexabiso kwaye isisombululo sengxaki kunokuba nzima ukusiqonda.
Ekuqaleni, olona khetho lufanelekileyo kukuqala ukuqonda ngakumbi kwaye uqonde ukuba indlela elula yindlela efanelekileyo. Ukuphupha i-baldness yabasetyhini sisimemo sokuzicwilisa ngakumbi kwizinto ezilula kunye nokumamela intuition yakho. Uzama ukucinga ngayo kwaye imeko yendalo kukuba isebenza ngcono, kuba "umsebenzi" wenziwe ngokuchanekileyo.
Zama ukucinga ngayo, yisebenzise kwaye ufezekise iinjongo ezazibekwe ekuqaleni.
Ukuphupha indoda endala inenkqayi
Amava obomi acela inyathelo kwaye akukho luncedo ukubambeka kwiintsuku zakudala kuba azibuyi. Zama ukuthathela ingqalelo zonke izinto kwaye utyekelo lwendalo luya kuba lolona lusebenza kakhulu, lusenza luqheleke. Khumbula ukumamela ngakumbi entliziyweni yakho kwaye uqonde ukuba akukho ndawo yokucinga kakhulu malunga nengxaki.
Kwelinye icala, ukubanakho ukucinga kuphela xa kuyenye echanekileyo. Ekupheleni kosuku, luchanekile olu hlobo lokulinganisela oluvumela zonke iingxaki ukuba zisonjululwe ngokulula. Nangona kunjalo, kuqhelekile ukuba abantu baphelelwe lithemba kwaye bagqibela ngokugxila ngokungaphezulu.
Ngokuqhelekileyo kulungile kwaye ibonisa ukuba kwanele ukuhlawula ingqalelo kwiingxaki ezenzekayo.
Ngako oko, ukuphupha malunga ne-baldness yinto nje yokukhangela iimeko kwaye uzame ukufumanisa yonke into.